IPhone ghọrọ nzi hit n'ihi na ọ na-enye ihe kasị mma Nchikota ntụrụndụ, nkwurịta okwu, na ọkachamara ngwa. Ozi ịntanetị ngwa bụ ụfọdụ n'ime kasị eji omume na iPhones. Ka na-anya na ụfọdụ email metụtara mbipụta chere ihu iPhone ọrụ.
1. Email adreesị jụrụ site na ihe nkesa
Nke a na-egosi na email ID na paswọọdụ ipịnyere na ntọala adabaghị. Dozie a, pịa Ntọala> mail> Họrọ akaụntụ email> mgbata akaụntụ> mgbanwe ntọala. Tinye ziri ezi nhazi ntọala na Malitegharịa ekwentị ahụ iPhone email ngwa.
2. nwere ike agaghị enweta email
Ma ọ bụrụ na-n'agbanyeghị nke ịbanye ziri ezi adreesị ozi-e na paswọọdụ, ma ọ bụrụ na ị na-enweta "ike ghara inwe mail" njehie, ọ bụ ihe amamihe ịkpọtụrụ gị email-eweta ọrụ ka ego ihe kpatara nke.
3. ekwentị ada ada na-enweta ọhụrụ ozi ịntanetị mgbe onye ọrụ bụ ịnweta email Igbe mbata si otutu ngwaọrụ
Ị na-arụ ọrụ na gị email ID eji gị PC, na ọhụrụ email-abịarute. Ma, otu email adịghị na iPhone ngwa. Nke a na-mara dị ka multi-ngwaọrụ mkpọchi-esi. Ọ bụghị naanị email ahịa, ma ọbụna mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ngwa ọdịnala dị ka nke Twitter adịghị nche gị banyere ọhụrụ Ịma Ọkwa ọ bụrụ na i wee banye na iji ọtụtụ ngwaọrụ.
4. Email igbe yiri oyi kpọnwụrụ
Nke a nwere ike ime mgbe wụnye ụfọdụ software mmelite. Ndị kasị mma nhọrọ bụ jide ekwentị n'ụlọ bọtịnụ maka sekọnd ole na ole ga-esi nke ngwa, na, na, Malitegharịa ekwentị gị na ekwentị. Mgbe ahụ, reopen email ngwa ọzọ.
5. Server adịghị ekwe ka relaying
IPhone ọrụ na-eche ihu nke a nke na-eji ha AOL akaụntụ na ha ngwaọrụ, karịsịa, mgbe resetting ha iPhone. Gaa na Ntọala> mail, kọntaktsị, kalinda> wee họrọ AOL na akaụntụ, na pịa oku ozi ihe nkesa (SMTP). Họrọ isi ihe nkesa, na Tinye aha njirimara gị paswọọdụ maka AOL akaụntụ na oku ozi ihe nkesa nkọwa ohere. Nke a ga-elekọta nke nsogbu ahụ.
6. Mail ngwa ọdịnala na-n'iyi
Ọtụtụ iPhone 4 na iPhone 5 ọrụ kọrọ a nke mgbe ntọhapụ nke iOS 8. User forums na-atụ aro na ọtụtụ n'ime iPhone 4 na nke 5 ọrụ mkpesa banyere ngwa ngwa arụmọrụ nke ozi ngwa, email ngwa, igwefoto na safari nchọgharị. Ọkachamara na-atụ aro na iOS 8.3 update emewo elekọta nsogbu ndị a. Ma, ọ bụrụ na ị ka na-eche ihu mbipụta, ndị kasị mma nhọrọ ga-iwepu iOS 8 na-akpụ akpụ azụ mbụ adabara nsụgharị nke sistemụ.
7. Issues na Yahoo email ngwa na iPhone
Ebe ọ bụ na November 2014, ọtụtụ Yahoo iOS mail ngwa ọrụ kọrọ ngwa ịrụ ọrụ metụtara mbipụta. The ngwa bụ ala ruo ọtụtụ ụbọchị n'etiti November afọ gara aga na May 2015. dabara nke ọma, Yahoo ka ndondo kwupụtara na ụlọ ọrụ emewo ofu a nke. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche ihu mbipụta na Yahoo email ngwa, jide n'aka na i nwere ọhụrụ version nke ngwa.
8.-apụghị ihichapụ email
Ọtụtụ ọrụ kọrọ a nke banyere enweghi ike ihichapụ ozi ịntanetị na-akpụ akpụ ha ka ha ahịhịa. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ga-esi "-enweghị ike ịgagharị ozi n'ebemkpofuozi" njehie. Nke a na nke triggered otu ugboro ọzọ mgbe mwepụta nke iOS 8.1. Ụzọ kasị mma aka nsogbu a bụ nanị site ihichapụ email nhazi na resetting akaụntụ.
Atụmatụ idozi iPhone email metụtara nsogbu
• Lelee na ekwentị mkpanaaka gị netwọk ma ọ bụ Wi-Fi njikọ
Cheta, na ekwentị gị si ngwa ga-mmekọrịta ozi ịntanetị naanị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ na jikọọ na internet. Jide n'aka na ngwa na-emelite. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-agaghị na-anata ozi ịntanetị na ekwentị gị, nzọụkwụ mbụ nke gị mkpa iji na-achọpụta na ekwentị gị ma ọ Wi-Fi na netwọk. Mgbe na-eme n'aka na ngwaọrụ gị na jikọọ na internet, na-emeghe nchegbu email ngwa si ntọala na ume na ngwa.
• Tulee email ntọala maka POP3
Pịa na Ntọala> wee pịa mail, kọntaktsị, kalinda> ozi kpọtara ọhụrụ data> na pịa ozi kpọtara tinyere oge maka otu. Ahọpụta a nhọrọ ga-ahụ na ekwentị gị akwụkwọ ndenye ego ọhụrụ ozi ịntanetị mgbe mgbe etiti oge na downloads ọhụrụ ozi ịntanetị.
• reinstall nchegbu email ngwa
Mgbe ụfọdụ, ngwa nwere ike ịkwụsị anata ọhụrụ ozi ịntanetị site na ihe nkesa ruru ngwa mwube yiri mbipụta. Nke a nwekwara ike ime ma ọ bụrụ na ị naghị wụnye mmelite maka gị ngwa mgbe ọ bụla zitere site na ngwa Mmepụta. Nanị ụzọ dozie a nke na-iwepu ngwa na mgbe ahụ wụnye ya ọzọ mgbe nkeji ole na ole. Mgbe wụnye, jide n'aka na ị na-abanye ziri ezi adreesị ozi-e na paswọọdụ maka nchegbu na akaụntụ.
• Re-Tinye aha njirimara na paswọọdụ na ngwa
Mgbe ụfọdụ, n'ihi na oru mbipụta, email ahịa nwere ike na-akpaghị aka banye gị nke gị na akaụntụ email. Ya mere, mgbe ọ bụla gị email ngwa kwụsị nbudata ọhụrụ ozi ịntanetị, ị kwesịrị ị na logout, ma na-agbalị na-egbu osisi ọzọ site na itinye gị na aha njirimara na paswọọdụ.
• Lelee na gị ọrụ si IT otu ọ bụrụ na gị ukara ID bụ ihu nsogbu
Ọ bụrụ na reentering aha njirimara na paswọọdụ ma ọ bụ ịlele IZIRỊTA ntọala adịghị arụ ọrụ, nzọụkwụ ọzọ na-akpọ gị ọrụ si IT otu na-ego ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-aga n'ihu mbipụta na nkesa email. Ego ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mgbanwe na nhazi.
• Lelee ma ọ bụrụ na eweta ọrụ email gị ka nwa oge egbochi akaụntụ gị
Email enye ọrụ dị ka Gmail enye kacha echebe site hackers. Ya mere, mgbe ọ bụla Gmail achọpụta rụọ ọrụ nbanye si unidentified ọnọdụ (unidentified ngwaọrụ), o nwere ike ruo nwa oge igbachi akaụntụ email gị. Dị otú ahụ, ị ​​ga-enweta ọhụrụ na-abata ozi ịntanetị na gị iPhone dị ka mma. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-agaghị anata gị ozi ịntanetị na ị na-eji ngwa, ị kwesịrị ị na-agbalị nbanye gị email akaụntụ site na ihe nchọgharị weebụ. Ọ bụrụ na eweta ọrụ email gị ewepula akaụntụ gị, ha ga-egosi na ngosi maka otu mgbe ị nbanye si a nchọgharị.
Ịnwere ike ịgbalite akaụntụ gị site na-esonụ ụfọdụ mfe nkwenye nzọụkwụ. Ozugbo akaụntụ gị dị na-arụsi ọrụ ike, ị ga-tịghachị aha njirimara na ọhụrụ paswọọdụ na iPhone ntọala na-esi gị email ngwa azụ na na egwu.
> Resource> iPhone> Common iPhone Email njikọ Nsogbu na Ụzọ idozi ha